Booliska Galmudug oo qabtay Midka mid ah ragii kufsaday Xamdi - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Booliska Galmudug oo qabtay Midka mid ah ragii kufsaday Xamdi
Booliska Galmudug oo qabtay Midka mid ah ragii kufsaday Xamdi
Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska dowlad Goboleedka Galmudug ayaa xalay saqdii dhexe Magaalada Cadaado ee Gobolka Galgaduud ku qabtay Nin lagu tuhmayo inuu ku lug lahaa kufsiga iyo dilkii Marxuumad Xamdi Maxamed Faarax loogu geystay Muqdisho.
“Ciidanka Boliiska Galmudug ayaa xalay xili dambe howlgal ay ka fuliyeen magaalada Cadaado ku soo qabtay eedeeysane Maxamed Ibrahim Cismaan, 24 jir ah, ku dhashay Muqdisho laguna tuhmaayo inuu ku lug lahaa kiiska marxuumad Xamdi Maxamed Faarax kana baxsaday magaalada Xamar falka ka dib” ayay tiri Taliye Zakiye Xuseen.
Sidoo kale Qoraalka ay soo saartay Taliye ku-xigeenka Ciidanka dowladda Federaalka ayaa waxaa ay sii raacsiisay “Waxaa u mahad celineenaa shacabka Galmudug oo ciidanka boliiska ku gacan siiyay soo qabashada eedeeysane Maxamed Ibrahim Cismaan oo baxsad ahaa”.
Si kastaba Taliska Booliska dowladda ayaa shalay shaaciyay in kiiska Marxuumad Xamdi Maxamed Faarax loo xiray 11 qof oo looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen falkii isugu jiray kufsiga iyo dilka ee loo geystay, isla markaana weli ay ku raad-joogaan dad kale, ayna socdaan baaritaano qoto-dheer ah.
Previous articleCiidamada ayaa gacanta kusoo dhigay askari dad shacab ku dilay Gaalkacyo
Next articleDG Qaar & AFRICOM oo iska kaashanayaa ladagaalanka Alshabaab
(Xog) Ciidamada NISA oo jir dilay Maxamuud Cumar Caddaan & Ganacsato kale oo la xiran
(Xog) Ciidamada NISA oo jir dilay Maxamuud Cumar Caddaan & Ganacsato kale oo la...
Ciidamada NISA ayaa magaalada Muqdisho ku xiray Ganacsato iyo Gaadiidley lagu eedeeyay in aay xiriir la yeesheen ururka Al-Shabaab, balse markii danbe la ogaaday...
(Xog) Ciidamada NISA oo jir dilay Maxamuud Cumar Caddaan & Ganacsato...